TSY MAINTSY IANJADIAM-PAHORIANA NY FIAINAN’NY MINO – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 novembre 21, 2014 Laisser un commentaire sur TSY MAINTSY IANJADIAM-PAHORIANA NY FIAINAN’NY MINO
« Ary hoy koa Izy tamin-dravehivavy: Hahabe dia hahabe ny fahorianao Aho, indrindra fa raha manan-anaka hianao; ary fahoriana no hiterahanao zanaka; ary ny vadinao no hianteheran’ny fanirianao, ka izy no hanapaka anao. » Genesisy 3:16
Fifaliam-be teo amin’ny fiainan’ny malagasy ny fananana taranaka. Aminy dia fitohizanaina ireny, no sady fameloma-maso ny anaran-dray aman-dreny. Noho izany, tsy vitsy amin’ireo ray aman-dreny lehibe no manome tso-drano feno ho an’ny mpanambady vao, ny amin’ny hananan’izy ireo taranaka vanona eo amin’ny fiainany. Tso-dranon’Andriamanitra ho antsika rehetra koa izany. Jereo anie; « Ary Andriamanitra nitso-drano an’i Noa sy ny zanany hoe; Maroa fara sy mihabetsaha ary mamenoa ny tany. » (Genesisy 9:1). Toy inona moa no fifalian’ny olona rehefa nahazo zanaka izy? Toa hadino ny fahoriana nisy teo amin’ny fiterahan-jaza!
Ao anatin’ny mangidy no misy ny mamy. Ny hahazoantsika zava-tsoa dia noho ny fiaretantsika zava-tsarotra maro. « Hahabe dia hahabe ny fahorianao Aho » hoy ny tenin’Andriamanitra. Manambara izany, fa misy fisehoan-javatra mahatonga alahelo sy fahoriana ho antsika koa avy amin’Andriamanitra. Hoy (Joba 2:10b): « Moa ny soa ihany va no horaisintsika avy amin’Andriamanitra, fa tsy ny ratsy koa? Saingy ny fahoriana mihatra amintsika avy amin’Andriamanitra dia toy ny tsoran-kazo avy amin’ny ray aman-dreny ho an’ny zanaka tiany. Farafaha-keliny; tsarovy ny zanak’Israely izay tena zanaka tian’Andriamanitra tokoa, nofidiny ho Azy, nanomanany tany vaovao; kanefa dia nitondra fahoriana mangidy nandritra ny taona maro, niaritra mosary, nirenireny tany amin’ny tany efitra, nobaboin’ny firenena hafa an-jato taonany, …sy ny maro hafa koa. Mba hanehoan’Andriamanitra ny voninahiny izay tsy takatry ny sain’izy ireo anefa dia nomeny azy ny mana ho sakafony. Na dia tany hay aza no nisy ny zanak’Israely dia nisotro rano izy ireo. Na dia naditra sy namalivaly an’Andriamanitra aza, dia nalefan’Andriamanitra ihany ny papelika ho sakafo mahavelona azy. Fahoriana nataon’Andriamanitra izany, saingy izany no nisy, dia natao ho sivana hisivanana izay handova ny lanitra. Izany indrindra no hevitra ambaran’ny hoe: « fahoriana no hiterahanao zanaka ». Fa na inona na inona fahoriana nentin’ny zanak’Israely sy ny zanak’Andriamanitra rehetra teo anivon’ny tantara dia teraka soamantsara ho azy ireny ihany ny fifaliana sy ny fiadanana. Ahoana no fisehon’izany? Satria tsapan’izy ireo fa hay tsy lavitra azy Andriamanitra amin’ny fotoan-tsarotra rehetra. Tsarovy ry havana fa raha miteny ny tenin’Andriamanitra hoe: « ny vadinao no hianteheran’ny fanirianao, ka izy no hanapaka anao. » dia milaza izany fa izay tafa-toetra amin’ny fitiavan’Andriamanitra ka miorina Aminy mandritra ny fahoriany rehetra, dia Andriamanitra mihintsy no tokiny sy heriny, ka manapaka ny fiainany ary manome fifaliana maharitra mandrakizay ho azy.
Ry hava-malala ao amin’ny Tompo, Jesosy Kristy no lohan’ny fiangonana, tsy maintsy miaritra fahoriana ny fiangonana. Raha Izy no lohany ao amin’ny tokan-tranontsika, tsy maintsy miaritra fahoriana koa izany. Mino ve ianao fa Jesosy no lohany eo amin’ny fiainanao? TSY MAINTSY IANJADIAM-PAHORIANA NY FIAINAN’NY MINO. Raha marary ve ny lohanao, tsy harary koa ny vatanao manontolo? Raha mangirifiry noho ny hazofijaliana Jesosy loharanom-pamonjena ho antsika, mainka moa fa isika? Raha ory, ka velona ao amin’i Jesosy anefa; dia Izy no mpanapaka ny fiainanao ka mitondra ny hoavinao rehetra ho eo anivon’ny fiadanana. Ny fahorian’i Jesosy Kristy no niteraka fifaliam-be ho antsika mianakavin’ny finoana. Mandray antsika anefa Izy anio, raha mifona sy mibebaka Aminy isika. Angataho ny Fanahy Masin’Andriamanitra fa hazavainy aminao izany. Ho aminao ny fiadanan’ny Tompo. Amen!
Publié parfilazantsaramada novembre 21, 2014 Publié dansUncategorized